Dr. Ibraahim Bursaliid oo Magaalada Nairobi Tababar ku siyay 20 Diblomaasi oo somali ah.. | Kismaayo24 News Agency
Sunday October 2, 2016 - 6:14 under Somali News by admin
Tababar lagu baranayey Siyaasadda ayaa loo soo xiray ku dhawaad 20 ka mid ah shaqaalaha ka howgala Safaaradda Sooomaaliya ku leedahay magaalada Nairobi.
Waxaa tababarkan soo agaasimay Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, iyadoo diblomaasiyiinta safaarada ay ku qaateen casharo la xiriira Siyaasada.
Danjire ku xigeenka ahna Qunsulka Koowaad ee Safaaradda Maxamed A. Sheekh Cusmaan oo soo xiray tababarkan, ayaa sheegay in Safaaraddu ay ku dedaalayso sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga iyo awoodda shaqaalaha ka howlgala safaaradda.
“Ujeedadu waa in aan awood u yeelanno in aan si wanaagsan ugu shaqeyno Dalkeena, gaar ahaan in diplomaasiyiintu ay awood u yeeshaan fulinta Siyaasadda arrimaha dibedda ee Soomaaliya. Aad ayaan ugu mahad celinayaa Dr. Ibraahim Bursaliid oo tababarkan fududeeyay iyo Shaqaalaha ka qeyb galay” ayuu yiri Maxamed Amiin.
Dr. Ibraahin Faarax Bursaliid, oo tababarkan bixinayay muddo Laba Toddobaad ah ayaa sheegay, in koorsooyinka noocan ah ay wax badan ku soo kordhin karaan howl-gallada dibedda ee Soomaaliya.
Bursaliid ayaa ammaanay Siyaasiyiintii ka qeyb galay tababarkan, kuwaasoo ka howlgala qeybaha ay Safaaraddu ka kooban tahay, wuxuuna ku dhiirri geliyay iney ku dhaqmaan waxa ay barteen, kuna dabaqaan howl maalmeedkooda caadiga ah.